Umsebenzi udokotela ubhekwa endala kakhulu. Ngazo zonke izikhathi, umphakathi udinga abantu anobungcweti ukuhlonza kanye ilapha lezo zifo. Odokotela abaningi basendulo babeze wehlela emlandweni, isibonelo, uHippocrates. Ingabe lo mkhakha ethandwa manje? Yiqiniso. Naphezu amaholo aphansi, abantu beze esikoleni sobudokotela uqhubeke usebenza kuma-okukhethekile yabo. Doctor - akuyona umsebenzi kodwa ubizo. Ukuze ngezinga akwanele wezemfundo, sidinga omuhle kwangaphakathi izimfanelo umuntu.
ukuthi udokotela kuyinto umsebenzi ophezulu? ERussia yesimanje, ayikho impendulo isobala kulo mbuzo. Nokho, kuwo wonke amazwe athuthukile lunye enjalo kubhekwa a hle kakhulu futhi odala imali esezingeni elifanele. Enkathini edlule zethu zamuva, esinazo emqondweni eSoviet Union, i-profession enjalo liyathandeka kwabaningi. Nokho, ngisho manje asikwazi ukuthi ukubaluleka ngezinga ukhohlwe unaphakade. Ezweni lethu kukhona eziningi odokotela anamagama big ukuthi zingabantu elidume amakhono abo, isipiliyoni kanye ithalente. Ngenxa yalokho, le okukhethekile kungaba kanyekanye wenze umsebenzi omuhle kakhulu, futhi usize abantu abaningi.
Unentshisekelo ubungcweti udokotela? Ngokuvamile abantu uneminye amandla kule ndawo bayasazi ubizo lwabo zisencane. Udokotela, ubani ofuna ukuba uchwepheshe we ekilasini eliphakeme, kumele abe nezimfanelo ezifana ikhono lokwenza futhi bathathe izinqumo e kwezimo ezicindezela kakhulu: ikhono elihle lokukhulumisana nabanye, umuzwa, umthwalo, ikhono kanye eningi kakhulu. Yiqiniso, kule okukhethekile futhi intelligence ebalulekile, uthando lwabantu, ukubekezela, ububele, futhi isifiso esiqotho ukusiza.
udokotela uJobe - akusiyo indawo lapho ngezimali. Ngiqinisile Uchwepheshe yimpumelelo kuyoba nguwe kuphela onikeza injabulo yangempela ukuze usize abanye. Kodwa manje kukhona abaningi imitholampilo Imali-based, lapho ungakwazi ngesikhathi enza okufanayo izinto ozithandayo bese uhola ngihola kahle. Ngakho-ke, uma unomuzwa wokuthi ufuna ukuya esikoleni nje salokhu okukhethekile, ungesabi ukufika izinkinga zezimali. Uma siyohlale bathuthukise amakhono abo kanye nolwazi, izinkinga iholo awusoze kuphakama.
Lokhu umsebenzi sehlukaniswe sebuningini izinkomba. Ngokwesibonelo, owelapha, Udokotela wezindlebe nokunye. Kukhona ubungcweti wezilwane udokotela, ngoba ukunakekelwa ngezokwelashwa kuyadingeka abantu nje kuphela kodwa futhi izilwane.
Zonke lezi amakhono adinga ukuqeqeshwa eside ezikhungweni zemfundo. Futhi lokhu akumangalisi, ngoba odokotela amaphutha nje abanazaba. Imfundo okhethekile wezokwelapha kuzothatha iminyaka 6. Nokho, ekupheleni kwalesi sikhathi, umuntu ngeke bafaneleke abakuyo. Ngemva kokuthweswa iziqu, ukuqeqeshwa okufanele uqhubeke. udokotela Ikusasa kumelwe ufunde ukuzijayeza ngaphansi kokuqondisa uchwepheshe nakho okwengeziwe, kuphela khona-ke uyokwazi ukusebenza ngokuzimela. Le nqubo ithatha okungenani 1-2 eminyakeni.
Yini ehlanganisiwe imisebenzi kadokotela? Okokuqala, kuba ukuhlinzekwa eziphuthumayo nokunakekela lohleliwe, futhi izifo, umsebenzi wokuvimbela, umsebenzi ezemfundo, ukuthuthukiswa zokwelapha ezintsha. Ngaphezu kwalokho, professional ukunakekelwa kwezempilo kufanele bakwazi ukusingatha imishini eyinkimbinkimbi, ugcwele kakhulu ezibhedlela zesimanje.
Yiqiniso, ochwepheshe bezokwelapha kudinga umuntu njalo ubuyekeze futhi anezele kolwazi lwabo. Uma uchwepheshe ofuna ukufinyelela ezindaweni eziphakemeyo, uye aphethwe ezihlukahlukene izifundo ukufunda ukwaziswa okwengeziwe njalo ngcono zonke amakhono abo. Kulokhu, umuntu bangaziqhayisa hhayi kuphela okukhethekile ekhethiwe, kodwa futhi okwabo yimpumelelo.
Cerebral nucleus basal.